Zvirongwa zvehotera zveRadisson muNigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger neGuinea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Zvirongwa zvehotera zveRadisson muNigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger neGuinea
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Niger Breaking Nhau • Nigeria Breaking News • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau
Radisson Hotel Group yekukura zano mu Africa chirongwa chakakosha muKushandira 2022, chirongwa cheGwara chemakore mashanu chirongwa chekushanda, nechinangwa chekuve imwe yemakambani matatu epamusoro epasi rose.
Boka rine 90 mahotera uye 18,000+ makamuri ari kushanda uye ari pasi pekuvandudzwa munyika makumi matatu nematatu, uye anoronga kusvika 31 emahotera uye 130+ makamuri mu Africa na23,000.
Andrew McLachlan, Mutevedzeri Mutevedzeri weMutungamiri, Kubudirira, Sub-Saharan Africa, Radisson Hotel Group, akati: “Tinofara kuzivisa madhiri gumi emahotera mumwedzi mipfumbamwe chete, zvinoenderana nekusaina kutsva mwedzi wega wega. Kusaina kwega kwega kunoenderana zvine hungwaru kuendesa yedu yemakore mashanu chirongwa chekuvandudza, kuburikidza nemitsva mitsva yekupinda, kuunzwa kwemakambani matsva uye kuendesa kukura kwakapetwa munzvimbo dzakakosha dzeAfrica. Kusvika pari zvino gore rino, tichave tichiwedzera 10+ dzimba kumabasa edu muAfrica uye tinoronga kuenderera mberi nekukura uku kuburikidza nekuwedzera mumisika inokosha mukondinendi iyi iri kubudirira. ”
Pamusoro peRadisson Hotel & Apartments Abidjan Plateau uye Park Inn neRadisson Lusaka Longacres mahotera akaziviswa kutanga kwegore rino, zvibvumirano zvisere zvitsva zvehotera zvinosanganisira:
Radisson Unganidzo Ikoyi Lagos, Naijeriya
Radisson Unganidzo, iyo Boka's premium mararamiro eunganidzwa eakasiyana mahotera zvivakwa munzvimbo dzakasarudzika zvinoita kutanga kwayo muIkoyi, Lagos uye ndiyo 3rdRadisson Collection hotera muAfrica. Iyi hotera yakasarudzika ichave iri munzvimbo ine mbiri yepamusoro muLagos Island, kumucheto kweLagos Lagoon.
Yakagadzirirwa kuvhurwa muna 2020, hotera yacho ichave nemakamuri zana nemakumi mashanu nenomwe, kusanganisira echimanjemanje uye emakamuri makuru uye suite yemutungamiri. Ihotera ichave nechikafu chakakura uye chinwiwa chinopihwa nezvitoro zvitanhatu zvakasiyana zvakagadzirirwa zviitiko zvekudya zvisingakanganwike, kusanganisira mazuva ese ekudyira uye maresitorendi akasarudzika pamwe neresitorendi yekutandarira nemabhawa matatu ayo anozogadzira nharaunda ine hukama. Ihotera yacho ichave nemisangano yakazara uye zviitiko zvezviitiko, zvine zvitoro zvisere zvakasiyana zvinogona kutambira vanhu vanopfuura mazana mana. Nzvimbo dzemagariro dzinosanganisira spa, jimi uye dziva.
Radisson Hotel Lagos Ikeja, Naijeriya
Kuunza yekutanga Radisson yakashongedzwa hotera kuNigeria, iyo upscale brand iyo inopa yakasarudzika sevhisi munzvimbo dzinoyevedza uye dzazvino.
Iri muIkeja, guta guru reLagos State, hotera iyi iri paMobolaji Anthony Highway, mugwagwa mukuru unobatanidza Ikeja nedzimwe nzvimbo dzeLagos. Iyo nhandare yenyika yose, iyo inoverengera makumi mashanu muzana yemafambiro ese emhepo muNigeria iri 50km kubva kuhotera.
Ihotera ine makamuri makumi mapfumbamwe nemaviri anosanganisira emakamuri akajairwa uye edeluxe pamwe nemasuti akagadzirirwa kufadza njere. Iyo zvakare ine matatu akasiyana, emuno akafuridzirwa chikafu uye zvinwiwa zvitoro, kusanganisira iyo yemazuva ese-yekudyira yekudyira, bhawa uye dziva tara. Musangano & zviitiko zvezviitiko, zvinosanganisira nzvimbo nhatu dzakasiyana uye bhizinesi nzvimbo. Uye zvakare, iyo hotera ine yakakosha yekutandarira yevashandi vendege, spa, jimu uye dziva rekushambira.
Park Inn naRadisson Inoshandira Imba Lagos VI, Nigeria
Zvakare ichiita kutanga kwayo muLagos ndiyo inokurumidza kukura iri pakati yepakati brand, Park Inn naRadisson, iyo ichavhura dzimba dzinoshandirwa, iri padhuze neAdetokunbo Ademola Street, iri boulevard huru mukati meVictoria Island.
Iine dzimba makumi mashanu nemapfumbamwe dzemahotera, hotera yacho ichapawo mana ezvokudya nezvokunwa zvakagadzirwa neresitorendi yemazuva ese yekudyira, bhawa uye masitepisi maviri ekunze. Musangano uye zviitiko zvezviitiko zvine matatu emakamuri emusangano anoshanduka anofukidza 55 sqm. Nzvimbo dzekuzorora dzinosanganisira jimu uye dziva rekushambira.
Radisson RED Hotera Abidjan, Ivory Coast:
Iyo Radisson RED Hotel Abidjan ndiyo Radisson Hotel Group yechipiri Radisson RED kusaina mu Africa uye ichave yekutanga hotera yepamusoro yepamusoro muAbidjan, guta guru mu Africa. Ihotera iyi ichave iri kuBoulevard de Gaulle, pamucheto wedziva muPlateau, dunhu rekutanga rebhizinesi reFrancophone West Africa, uye inzvimbo yakakodzera yemadhorobha yechiratidzo chinotora twist yekutamba pane zvakajairwa.
Ihotera nyowani-yakavakwa, yakarongerwa kuvhurwa muna 2021, ichave nemakamuri zana negumi nematanhatu anosanganisira emakamuri akajairwa uye masuti ane akashinga madziro mifananidzo uye dhizaini ine maitiro. Chipo chekudya chehotera ichi chinosanganisira Redeli, yepamberi dhiza pamwe nemweya webhawa pamwe neOuiBar, padenga repabha uye nhurikidzwa ine panoramic guta uye maonero egungwa. Nzvimbo dzekuzorora dzichasanganisira padenga rekushambira nedziva uye yakakwana yekurovedza muviri, ichigadzira buzzing yekudyidzana yenzvimbo. Musangano uye zviitiko nzvimbo nzvimbo ichatsemura tsika neazvino chiitiko studio uye mana ekuverengera makamuri.
Sezvo irwo hotera riri kukura nekukurumidza mu Africa, Radisson Blu, ichapinda munzvimbo yekutanga muAfrica yezvemari, Casablanca, nekuvhurwa kweRadisson Blu Hotel, Casablanca muna 2019. Ihotera iri richava munzvimbo yebhizimusi reguta uye pamusuwo we zvinokwezva zvikuru senge inonakidza enhoroondo Old Medina (guta rekare), Casablanca Marina uye Hassan II Mosque, wechipiri musikiti mukuru pasi rose.
Ihotera nyowani-yekuvaka ichave nemakamuri zana nemakumi maviri, iine musanganiswa wemakamuri emhando yepamusoro uye masuti. Kudhiza kurudziro kubva kuchikafu chemuno, zvekudya uye zvekunwa nzvimbo zvinosanganisira imba yekudyira uye mabhawa maviri, aine nzvimbo dzekuzorora dzinosanganisira yakazara-yakagadzirirwa gym uye runako salon. Nzvimbo huru yemusangano yehotera ichavakwa pamusoro penzvimbo ye120m².
Park Inn naRadisson Tunis:
Radisson Hotel Group inopinda muguta guru uye rakakura muguta reTunisia nePark Inn naRadisson Tunis. Ihotera ichave iri pakati peguta rine vanhu, makiromita mashanu chete kubva kuTunis-Carthage International Airport, iine nyore kupinda munzira huru. Icho chiri kufambawo chinhambwe kubva kuTunis Chitima Chiteshi uye bhizinesi dunhu reAvenue Habib Bourguiba uye Avenue Mohamed V. Iyo Medina ine zvinopfuura mazana manomwe zvivakwa, dzimbahwe, mausoleums uye Great Mosque iri 5km chete kubva kuhotera.
Ihotera yacho ichave nemakamuri 102, nemusanganiswa wemakamuri akajairwa uye masuti. Zvekudya uye zvekunwa sarudzo zvinosanganisira imba yekudyira uye padenga rebar, nepo nzvimbo dzekuzorora dzichisanganisira yekurovedza muviri. Ihotera ichave yakashongedzerwa zvakanaka kumisangano uye zviitiko zvine nzvimbo yakakura yemusangano, iyo ichavakwa pamusoro penzvimbo ye261m² uye ine dzimba nhatu dzemusangano, makamuri matatu emusangano uye boardroom.
Radisson Blu Hotera Niamey, Niger
Kupinda musika mutsva wemuAfrica, iyo nyowani-inovaka Radisson Blu Hotel, Niamey ichavhura mu2019.Niger, guta guru reNiger uye nzvimbo muFrancophone West Africa chikamu cheECOWAS zvakare uye ichasimbisa danho reRadisson Hotel Group kuWest. Africa. Ihotera ichatungamira musika seNiamey sezvo ichizadza kushomeka kwemahotera emhando yepamusoro pasi rose mudunhu iri.
Ihotera-yemakamuri 196 ichasanganisira mashanu akasiyana emakamuri emhando, anosanganisira emhando yepamusoro emutungamiriri uye masutu emambo. Zvokudya nezvokunwa zvinotengesera zvakasiyana siyana zvinosanganisira maresitorendi maviri, mabhawa maviri uye imba yekutandarira yepamusoro. Iyo yakazara musangano uye zviitiko nzvimbo zvichatenderera pamusoro penzvimbo ye1252m², inosanganisira imba yemusangano, nzvimbo yebhizimusi uye akasiyana makamuri emisangano. Ihotera iinewo spa, imba yekusimbisa muviri uye dziva rekushambira.
Radisson Blu Hotera Conakry, Republic yeGuinea
Radisson Blu inopinda muConakry, guta guru reGuinea uye nzvimbo yeFrancophone West Africa uye yakarongerwa kuvhurwa muna 2019. Ihotera iyi ichatungamira musika wepamusoro wehotera wepamusoro weConakry nenzvimbo yayo yepamusoro, inowanikwa, uye yepasi rose yepamusoro yekumaka.
Iyo hotera yakamiswa zvakanaka padyo nepakati peguta uye yakakomberedzwa neConferensi Center, Palais du Peuple, iyo National Hospital uye mamishinari akawanda. Iyo Conakry International Airport iri pasi pe10km kure.
Ihotera yacho ine makamuri ekurara gumi nemaviri, anosanganisira mashanu emhando dzakasiyana dzemakamuri, kusanganisira masutu maviri emutungamiri. Chikafu nechinwiwa chinopa chinosanganisira yekudya-kwemazuva ese uye zvepamusoro maresitorendi, imba yekutandarira nedhorobha. Musangano uye zviitiko zvezviitiko zvinowedzera pamusoro pe123m zvine dzimba ina dzemusangano dzinoshanduka. Ihotera yacho zvakare ichave ne spa, imba yekusimbisa muviri uye dziva rekushambira.